UNICEF oo sheegtay in dhalinyaro badan oo qaxooti ah ay la kulmaan in laga faa’iidaysto - Horn Future
London (Horn Future)-In ka badan saddex-meelood laba carruurta iyo dhalinyarada tahriibayaasha ah ee isku dayaya inay gaadhaan Yurub ee ka yimiday Afrika ayaa la kulmay xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda bini’aadanka,sida ay sheegtay cilmibaadhis Qaramada Midoobay ay faafisay UN-ka.
Sanduuqa Carruurta ee Qaramada Midoobay ee (UNICEF) ayaa sheegay in 77% kuwa ku socdaalaya hilinka ku yaalla Badhtamaha Mediterranean ka ay leeyihiin “khibrad toos ah oo ku saabsan xadgudubka,ka faa’iidaysiga iyo falal laga yaabo inay ka dhigaan ilaa heer ka ganacsiga dadka .”
Afshan Khan, oo ah Agaasimaha UNICEF ee Yurub u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegay in imika ay tahay heer lagu dhaqmo oo caadi ah in caruurta kasoo gudbaysa Badda Mediterranean lagu xadgudbo,la tahriibyo,la garaaco iyo in la takooro.
Khan ayaa ku booriyay hoggaamiyayaasha Yurub inay tallaabo ka qaadaan xad-gudubyo muuqda oo ay raadiyaan waxyaabo kale oo lagu joojinayo dhibaatooyinka bini’adamnimo.
Eugenio Ambrosi oo ah agaasimaha gobolka ee IOM, ayaa sidoo kale sheegay in tallaabooyinka kale duwan ay noqon doonaan kuwo aanan waxtar lahayn hadii aanan la samaynin waddooyin socdaal oo sharci ah.
Warbixinta oo ku saleysan markhaatiyada ku dhowaad 22,000 oo qaxooti ah oo 11,000 oo kamid ah ay yihiin carruur iyo dhallinyaro ah, ayaa sidoo kale waxa ku jira cadeemyo kamid ah kuwa isku dayaya inay gaadhaan Yurub.
Aimamo oo ah ilmo 16 jir ah oo ka yimiday dalka Gambia ayaa waxa uu yidhi”Haddii aad isku daydo inaad ka baxsato,way ku garaacaan, haddii aad joojisid shaqada, way ku garaaceen, annagu waxaan nahay sidii addoommo oo kale, dhammaadka maalinta, waxay kugu xidhayaan gudaha,”.
Aimamo, oo lagu wareystay hoyga gabaadka u ah ee uu ka deggan yahay Italy, ayaa waxa uu ku tilmaamay “in kooxaha dadka ka ganacsada ay ku qasbeen inuu qabto shaqo gacmeed aad u adag markii uu yimid Libya,”sida uu ku sheegay warbixintan.
Hilinka Badhtamaha Mediterranean ayaa lagu dhaambadeeyay sida “Halis Gaar ah” halkaas oo inta badan dadka qaxootiga ah ay ka soo gudbaan dalka Libya oo wali ay ka jirto sharci darro, maeeshiyooyin iyo dembiilayaal.
« Baarlamaanka Britain oo oggollaaday xeerka ka bixitaanka Britain ee Midowga Yurub(Brexit)	» Wasiirka isgaadhsiinta Isra’iil oo xaqiijiyay in xubno ka socda amiirada Khaliijka ay soo booqdeen